Izikibha → Izimpahla zokumaketha
Shizi yizingubo ezisezingeni eliphakeme ezisebenza kahle nezingubo zabantu abasebenzayo, abasebenzi noma abafundi. Ama-T-shirts athandwa kakhulu iminyaka eminingi. Ukuhluka kwabo nokuguquguquka kwabo kube nomthelela omkhulu ekudumeni kwabo.
T-shirts zingasetshenziswa njengoba zombili izembatho zabasebenzi kanye umkhiqizo wokuphromotha.
Zibonakaliswa ngokuguquguquka okuphezulu, okunwebisa kakhulu ububanzi bezinhlelo zokusebenza. Ukuceba kokunikezwa kwama-T-shirts kukuvumela ukuthi uthenge okuhlukahlukene, imibala, amaphethini, futhi ngaphezu kwakho konke, osayizi.
Ngaphezu kwezikibha zakudala, sinezikibha zokuxwayisa ezikhethwe ngokulangazela ngabamele izinkampani ezisetshenziswayo, ezedlulisa nokwakha.
Sinikezela ngezimpahla ezahlukahlukene ukuze wonke umuntu athole umkhiqizo ohlangabezana nezidingo zakhe. Sinamamodeli wamakilasi ahlukahlukene - ikhwalithi ejwayelekile ne-premium.
Ngenxa yekhwalithi yabo ephezulu, bazokwanelisa ngisho namakhasimende afunwa kakhulu. Njengabanye imikhiqizo - Izikibha zingenziwa ngezifiso nazo ukugqokwa kwamakhompyutha noma ukuphrinta isikrini.
Ngasikhathi sinye, kufanele kukhunjulwe ukuthi esimweni sokufakelwa, ihluzo ezinobuningi obukhulu endaweni encane kakhulu azinconywa. Ngakithi sibonga iminyaka eminingi yesipiliyoni nensizakalo ekhethekile, ungathola usizo ngokuhlukahluka kakhulu okuthembekile.
Siphinde futhi sinikeze amanani wokuncintisana nokugcwaliseka okusheshayo kwe-oda. Sikumema ukuthi uthole isilinganiso samahhala.
Isisindo esikhulu seT-shirt
Ama-T-shirts nezingubo, ukuze kuhlotshaniswe nekhwalithi nobungcweti, kufanele kube okuhlala isikhathi eside futhi kube ntofontofo, ikakhulukazi lapho sifuna ukubeka uphawu lwenkampani noma lweklabhu kubo.
Izikibha esitolo sethu zenziwe ngezinto ezisindayo, ezenza ukuthi zimelane nomonakalo.
Ngisho nokugeza okuphindaphindiwe akunangozi. Izingubo zigcina ifomu lazo lokuqala kumaviki amaningi, okwenza ukuthi ukutshalwa kwezimali kulo mkhiqizo kube nenzuzo.
Izikibha zitholakala kwezethu isitolo enziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu ezivumelana nomsebenzisi futhi zimvumela inkululeko yokuhamba. Ukuqoqwa kwama-T-shirts asuselwa kubuchwepheshe be-ACTIVE-DRY kudinga ukunakwa ngokukhethekile. Basebenza ngisho nasezimeni ezibucayi lapho kunobungozi obukhulu bokujuluka ngokweqile.
Ukuqedwa ngokucophelela kwezinto zokwakha, kanye nokunemba ngokuningiliziwe, kwenze kube yingubo ezosebenza ezimweni eziningi.
Izikibha zisetshenziswa ngokulangazelela njengezembatho zabasebenzi, ikakhulukazi kusethi, isb.ezimpahla zokugqoka zezikhathi ezibandayo, ezifana nesb. uboya, kepha futhi baphathwa njengegajethi yebhizinisi yamakhasimende noma osonkontileka.
Ukusetshenziswa kwabo ngezingubo zokuhlobisa kuyasebenza nangezinhlobo ezahlukahlukene zemicimbi noma njengomklomelo emiqhudelwaneni. Konke kuya ngomqondo wohlobo lomkhiqizo. Kuyindlela yezomnotho yokuqinisekisa ukuthi wena nabemukeli bakho bathola induduzo ngasikhathi sinye, futhi ngasikhathi sinye nentshisekelo yomkhiqizo.
Ama-T-shirts ahlongozwayo kanye nama-T-shirts enziwe ngokucophelela imininingwane.
Ukuqedela ubuhle bezinto zokwenziwa kukwenza kube yingubo ezosebenza ezimbonini eziningi ezahlukahlukene. Ama-T-shirts ajwayela lesi sibalo, kepha awakuvimbeli ukunyakaza noma kubangele ukungaphatheki kahle.
Phakathi kwama-t-shirts kunezinhlobo zamadoda, abesifazane, izingane nezomhlaba jikelele - unisex. Udinga ukukhetha usayizi ofanele kuphela. Amamodeli wokucobisisa yiqembu elikhethekile lemikhiqizo, ngenxa yokuthi kungenzeka ukukhuphula izinga lokuphepha emsebenzini.
Sikulawo amandla akho ekukhetheni nakwenziwe ngezifiso zemikhiqizo. Sinesipaki somshini esithuthukile esisinikeza umsebenzi osebenza kahle kanye nekhwalithi ephezulu kumakhasimende ethu.
Uhla oluphelele lwamamodeli lungathengwa zombili esitolo sethu se-inthanethi www.pm.com.pl noma esitolo sethu kwa-Allegro "PRODUCER-BHP".
Uma ufuna ukubona ama-oda wethu wokufekethisa oyisampula, sicela uvakashele ithebhu mayelana i-firmie.
Ama-t-shirts aprintiwe e-Esgroizikibha ze-decathlon eziphrintiweizikibha ezipholilelapho kushicilelwa izikibhalapho ungathenga khona izikibha eziphrintiwelapho ungathenga khona izikibha ngoshicilelo lwakholapho ungathenga khona izikibha eziphrintiwelapho unga-oda ama-t-shirts ngokuprinta kwakholapho ungenza khona ama-T-shirts ngephrintalapho kungcono uku-oda ama-t-shirts ngephrinta yakholapho uku-oda ama-T-shirts aphrintiwelapho uku-oda ama-t-shirts ngephrinta yakholapho ukwenza ama-T-shirts aphrintiwekubiza malini ukukhiqiza i-T-shirt ephrintiwekubiza malini ukwenza i-T-shirt ephrintiweukugeza kanjani izikibha ezimhlophe eziphrintiweukugeza kanjani izikibha eziphrintiweungawashayela kanjani ama-T-shirts aphrintiweungawenza kanjani ama-T-shirts aphrintiweungawenza kanjani ama-t-shirts ngephrintaAmahembeIzikibha ezingama-3dukusebenzisa izikibha eziphrintiweizikibha zabesifazaneizikibha zabesifazane eziphrintiweizikibha zabesifazane ngokuprinta kwakhoizikibha zezingane ezinokuphrintaukusebenzisa izikibha eziphrintiweIzithelo zama-loom t-shirts eziphrintiweizikibha zezokwelapha eziphrintiweizikibha zamadodaizikibha zamadoda eziphrintiweizikibha zamadoda ezinokuphrinta okungu-3dizikibha zezithuthuthuizikibha zokuzivocavocaT-shirts ngokwezifisoamahembe nbaizibuko zobusuku babesifazaneamahembe webholaamahembe webhola ngokuprintaamajezi ebhola ngokuprinta kwakhoShizi wepolo ngephrintaAmajezi weqembu lasePolandizikibha zomsebenzi ngephrintaamahembe ezemidlaloizikibha zezemidlalo eziphrintiweizikibha zezemidlalo zokuphrinta kwakhoamahembe athambisayoAma-T-shirts ama-Thermoactive aprintiweIzikibha eziphrintiweizikibha eziphrintiwe 3dIzikibha eziphrintiwe ze-etigroT-shirts nokufakwa kweBiałystokizikibha ezinama-prints abesifazaneizikibha eziprintiwe izinganeIzikibha eziphrintiwe ze-GdańskIzikibha eziphrintiwe lapho ungathenga khonaIzikibha eziphrintiwe lapho uku-odaizikibha eziphrintiwe ukuthi zenziwa kanjaniIzikibha ezinemisipha efana nobaba, indodanaT-shirts ngephrinta yaseKatowiceT-shirts ngephrinta yaseKrakakizikibha eziphrintiwe ngesikebheIzikibha eziphrintiwe neLublinizikibha eziprintiwe amadodaizikibha ezibhaliwe ngokwezifisoAma-T-shirts anama-olsztynT-shirts nge poznań ephrintiweIzikibha ezinokuphrinta uquqabaAma-T-shirts anemisipha ephrintiweIzikibha ezinephrinta yaseWarsawIzikibha ezinombhalo wakho uqoboIzikibha ezinombhalo we-wrocławIzikibha ezinemibhalo eqoshiweIzikibha ezinokuphrinta kokushisekela izweizikibha ezinokuphrinta kwakhoIzikibha ezine-allegro yakho uqoboT-shirts ngeKrakow yakho ephrintiweIzikibha ezinezimpawu zakho zokuphrinta poznańIzikibha ezinokuphrinta kwakho ezishibhileIzikibha ezinombhalo wakho we-warszawaAma-T-shirts akho siquizikibha ze-megaT-shirt printsama-iron-ons wezikibhaukwakhiwa kwesikibhaizikibha ezihlekisayoizikibha ezihlekisayo eziphrintiweizikibha ezishibhile eziphrintiweizikibha ezishibhile ezinokuphrinta kwakho
5 / 5 ( 19 amavoti )